Ma yihiin cuntooyinka ugu xun carruurta | Bezzia
Waa maxay cuntooyinka ugu xun carruurta
Maria Jose Roldan | 01/10/2021 22:57 | Talada hooyooyinka
Waalidiintu waa inay door muhiim ah siiyaan nafaqada carruurtooda. Waxaa wanaagsan in maadaama ay yaryihiin, carruurtu raacaan caadooyinka habboon marka ay timaaddo cunista. Waa inay ogaadaan mar walba waxa caafimaad u leh jidhkooda iyo waxa waxyeellada leh.
Maqaalka soo socda ayaan ka hadli doonaa cuntooyinkaas oo gebi ahaanba waxyeello u leh caafimaadka qofka yar.
3 Budada kookaha
4 Cuntooyinka warshadaha
5 Cuntooyinka warshadaysan
Casiirku waa cuntooyin hodan ku ah carbohydrate oo leh sonkor badan sida gulukooska iyo fructose. Cunista xad -dhaafka ah ee casiirku waxay u horseedi kartaa carruurta inay yeeshaan sonkorowga iyo dhibaatooyinka miisaanka muddada dhexe. Beddelka casiirka, ikhtiyaarka ugu fiican waa caanaha lo'da ama biyaha.
Badi badarka badarka laga helay dukaanka weyn, waxay leeyihiin qiime nafaqo oo hooseeya waxayna hodan ku yihiin sonkorta lagu daray. Nasiib darro iyo in kasta oo la arkay, waa badeecadda xiddigta ee quraacda carruurta. Marka laga hadlayo bixinta badarka carruurta yaryar, ikhtiyaarka ugu fiican waa miro Waa cunto leh tabaruc weyn oo tamar leh oo jirka siisa fiber tayo leh.
Mid kale oo ka mid ah cuntooyinka ugu caansan uguna waxyeellada badan carruurta waa budada kookaha. Ilmaha aan ku quraacan galaas caano ah iyo kookaha milmi kara waa dhif. Sida badeecooyinka hore loo arkay, kookaha la milmiyey si dhib leh uma siiso nafaqooyin waxayna leedahay xaddi badan oo sonkor ah. Xulashada ugu fiican ayaa ah inaad qaadato kookaha gebi ahaanba xumaaday oo leh 100% daahir.
Cunnooyin aad u yar ayaa waxyeello u leh oo u xun ilmaha sida macmacaanka warshadaha. Kuwani waa badeecooyin leh dufan badan oo dufan leh iyo sonkor fudud. Isticmaalka xad -dhaafka ah ee macmacaannada la sheegay, waxay u horseedi kartaa ilmaha dhibaato caafimaad oo halis ah muddada dhexe iyo muddada fog. Habka ugu habboon ayaa ah in la doorto miro ama miraha caanaha oo dhan maadaama ay aad uga caafimaad badan yihiin.
Cuntooyinkani waxay leeyihiin waxyaabo badan oo lagu daro waxayna hodan ku yihiin dufanka trans iyo milixda. Taasi waa sababta badeecooyinka noocaas ah ay tahay in laga tirtiro cunnada maalinlaha ah ee cunugga oo had iyo jeer ay doortaan suxuunta macmalka ah ee laga sameeyay maaddooyinka dabiiciga ah oo aan lahayn wax lagu daro sida khudaarta, kalluunka ama ukunta.
Marka la soo koobo, kuwani waa qaar ka mid ah cuntooyinka ay tahay inaysan ku jirin cuntada dhallaanka ama carruurta. Waxa ugu fiican xaalad kasta waa in la doorto cunto guriga lagu sameeyo oo laga sameeyo cuntooyin cusub sida cagaarka ama khudaarta. Waalidiintu waa inay had iyo jeer ka warqabaan waxtarka nafaqada ee carruurtooda.
Cunto wanaagsan oo sax ah waxay ku xiran tahay in ilmuhu kori karo iyo in kale hab caafimaad qaba oo aan lahayn dhibaatooyin caafimaad. Waxbarashada gudaheeda, caadooyinka cunidda wanaagsan waa inay door weyn ka ciyaaraan, taasoo u oggolaanaysa ilmaha inuu si habboon wax u cuno. La qabsiga cunidda si sax ah marka carruurtu waxay ka dhigaysaa inay ogaadaan sannado badan wixii caafimaadkooda wax u dhimaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Talada hooyooyinka » Waa maxay cuntooyinka ugu xun carruurta
3 -ta amar ee Qashinka Zero
Dharka miisaska si aad u labisato miiska dayrta